Momba anay - Jiangsu Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd.
Fanaovana endrika tonga lafatra, tanteraho amin'ny lehibe
Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd dia mpanamboatra fitaovana enti-manamboatra semiconductor any Shina. Miaraka amin'ny haitao ekena manerantany sy ny fahaiza-manao famokarana ekena sy noraisina, ny mpanorina ny Runau Electronics dia niditra an-tsehatra tamin'ny indostrian'ny semikonductor mahery tany Shina nandritra ny 30 taona mahery. Runau dia nahazo ny fahaiza-manao hanome ny vahaolana vaovao indrindra amin'ny fikarohana, famolavolana, fivoarana, fandrefesana ary famokarana fitaovana avo lenta semiconductor, modules herinaratra ary vondron-kery misy rafitra mifandraika amin'ny herinaratra. Runau dia manana fahaiza-manao feno hiantohana hanomezana ny haitao ny fitaovana elektronika herinaratra azo antoka amin'ny fanjakana sy azo antoka. Isaky ny raharaha ilaina, ny teknisianina, ny injenieranay, ny ekipan'ny famokarana ary ny herin'ny varotra dia miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifanay mba hahazoana antoka ny kalitao avo lenta, amin'ny fotoana mahamety azy ary ny fahombiazan'ny jiro elektrika.
Ny orinasa dia natsangana tamin'ny atrikasa manadio 1000m2 tena madio, ny taona 100 no nametraka ny fitaovana famokarana mandroso sy fitaovana fandrefesana indrindra, ny talenta mpikambana indrindra amin'ny mpiasa efa za-draharaha 70 taona amin'ny tsipika famokarana, injeniera sy teknisiana 12 matihanina (injeniera 4 lehibe) ao amin'ny R&D sy ireo singa mpamokatra. . Dr. Henri Assalit, malaza amin'ny indostrian'ny semiconductor amerikanina dia nantsoina ho mpanolo-tsaina amin'ny fampandrosoana teknika. Ny fahaizan'ny fizotran'ny fanapahana sy ny fenitry ny vokatra dia napetraka tao Runau hametrahana ny tombony mifaninana amin'ny teknika sy ny fanamboarana.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny evolisiona sy ny teknolojia fanapahana farany, Runau dia manam-pahaizana ekena amin'ny famokarana fitaovana semiconductor hery avo lenta sy fahombiazana any Shina, ny karatra misy ny:
● Trista diode thyristor sy rectifier, puce square thyristor
● Diode thyristor & rectifier, diode welder, GTO, IGBT press-pack, modules power ary fivoriambe.
● Chipèter thyristor toradroa
● 6"Thyristor & rectifier ary 8500V fitaovana misy herinaratra avo dia misy ao amin'ny tsipika famokarana.
Ny kanton'ny vokatra dia ampiharina amin'ny herin'ny herinaratra, ny mihodina, ny fanamafisana induction, ny plating elektrika, ny electrolysis, ny mpanova matetika, ny starter malefaka, ny hafainganam-pandehan'ny maotera, ny UPS, ny SVC & SVG ary ny kojakojan-tokantrano, sns.
I Runau dia nolovaina tamin'ny fanehoan-kevitra haingana, fanatsarana tsy tapaka ary ny paikadin'ny serivisy iraisam-pirenena. Runau dia hanohy hanome ny vahaolana manatsara sy mifantoka amin'ny mpanjifa eo amin'ny sehatry ny herinaratra avo lenta sy ny fitaovana avo lenta ary ny fampidirana ny rafitra amin'ny fampiharana semiconductor hery ho an'ny mpiara-miasa manerantany.